‘जाइरा’ ट्रेलर नम्रताको एक्सन अवतार - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	‘जाइरा’ ट्रेलर नम्रताको एक्सन अवतार
by Movie Club Nepal २३ श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:४५ November 22, 2019
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:४५ November 22, 2019
जस्तोसुकै भूमिकामा आफूलाई जीवन्त रुपमा उतार्न सफल अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ पहिलो पटक एक्सन अवतारमा प्रस्तुत हुँदैछिन् । लभर गर्लको भूमिकामा निकै रुचाइएकी उनी भाद्र ६ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘जाइरा’ मा मिक्स मार्शल आर्ट खेलाडीको भूमिकामा छिन् । यो उनको करिअरको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भूमिका मानिएको छ ।
बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको फिल्मको ट्रेलरमा उनलाई एक्सन अवतारमा देख्न सकिन्छ । उनको लुक्स पनि निकै फरक छ । क्यारेक्टरलाई न्याय गर्न उनले फिल्मका लागि आफ्नो कपाल समेत मुण्डन गरेकी थिइन् । उनी ‘जाइरा’ मा एक्सन गर्न निकै गाह्रो भएको बताउँछिन् । धेरैपटक उनले पेनकिलर खाएर फिल्ममा एक्सन सिन दिएकी थिइन् ।
‘मेरो एउटा साथी छ’, ‘नोभेम्बर रेन’, ‘क्लासिक’ लगायतका लभस्टोरी फिल्ममा सोझी युवतीको भूमिका निभाएकी उनी गत वर्षको हिट फिल्म ‘प्रसाद’ मा विवाहित महिलाको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी थिइन् । तर, उनले आजसम्म कुनै फिल्ममा नकारात्मक भूमिका निभाएकी छैनन् । उनलाई यो गर्ने इच्छै नभएको भने होइन । तर, केले रोक्यो त ?
‘जाइरा’ मा नम्रता र प्रमोदसँगै अनुप बिक्रम शाही, रेमन दास श्रेष्ठ, नव–कलाकारहरु श्रृजना रेग्मी, सुजता श्रेष्ठ र सम्राट मगरले शिर्ष भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । निर्देशक श्रेष्ठ र निरोज महर्जनले पटकथा तयार पारेका हुन् । प्रशन्न गोपाली कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मलाई बाबु श्रेष्ठले खिचेका हुन् भने लोकेश बज्रचार्यको सम्पादन छ ।
अभिनेत्री श्रेष्ठको होम प्रोक्डक्सन नम्रता श्रेष्ठ प्रोडक्सन र ट्रेन्ड सेटर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा सम्राट बस्नेको द्वन्द्व निर्देशन छ । ‘जाइरा’ मा एक्सन अवतारमा प्रस्तुत भएकी अभिनेत्री नम्रताले आफूले कहिल्यै एक्सन फिल्म गर्नेबारे नसोचेको बताउँछिन् । निर्देशक श्रेष्ठले कन्भिन्स गराएपछि आफू यो फिल्म गर्न तयार भएको उनको भनाई छ ।
१० पुष २०७५, मंगलवार १५:४५
‘समर लभ’ को टोली बुटवलमा
४ माघ २०७५, शुक्रबार १७:१५
दु:खद खबर बिपिन कार्की दुर्घटनामा !
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:०३
‘समर लभ’ हलहलमा !
२५ माघ २०७५, शुक्रबार १६:२४
नाचेर ५० हजार जित्ने मौका
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:२८
राजा साहेब नाम तय रमितको फिल्मको !
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार १९:१०